Namuhla uKristin Kreuk ungumdlali owaziwayo futhi owaziwayo waseCanada eHollywood. Owesifazane osemusha unabalandeli abaningi emhlabeni jikelele, futhi usuvele ewine imiklomelo eminingi ehloniphekile. Umdlali wezentengiselwano uqhubeka esebenza ngamafilimu futhi uvela njalo kuthelevishini. Ngakho-ke, abaningi banesithakazelo kudatha yakhe yokuphila kanye nokuphila komuntu siqu.
Ukwaziswa okujwayelekile mayelana nomdlali we-actress
Isidumo sesikhathi esizayo sazalwa ngo-December 30, 1982 esifundazweni saseCanada saseBrithani Columbia, edolobheni laseVancouver. Uyise wakhe - uPeter Kreuk - owokuzalwa waseHolland, nonina - uDeanna Che - wazalelwa e-Indonesia. Bobabili abazali bentombazane basebenza njengabaqambi bezwe. Ngendlela, umlingisi unodadewethu u-Justine.
Kufanele kuqaphele ukuthi ebuntwaneni uChristine wayebandakanyeka kakhulu ezemidlalo, kuhlanganise nokuzivocavoca kanye nekarate. Kodwa, ngeshwa, kwakudingeka akhohlwe ngomsebenzi othembisayo womdlali wezemidlalo ngenxa yezinkinga zomgogodla. Yiqiniso, le ntombazane yayithanda ubuciko besiteji, ngezikhathi ezithile yayihlanganyela emithethweni yesikole yaseshashalazini. Kodwa angikaze ngizicabange ngomsebenzi wokwenza umsebenzi - le ntombazane yayilungele ukungena eNyuvesi yaseSimon Freisen iphinde ifunde ubugebengu, imvelo kanye nengqondo. Kodwa isiphetho sinqume ngokuhlukile.
Owokuqala usebenza ku-cinema
Ngo-2001, uVancouver uhlele ukuqala ukudubula uchungechunge olusha lwethelevishini "Edgemont". Futhi baqala ukufuna umdlali ofanelekayo omunye wezindima eziyinhloko. Ukubukeka okungajwayelekile futhi okungavamile kwentombazane encane kwamenza waba ngumuntu ofanelekayo. Ngezinkathi ezinhlanu, uKristin Kreuk wadlala umfundi wesikole esiphakeme - owesifazane waseShayina ogama lakhe linguLaurel Yeng. Ngonyaka ofanayo no-2001, wadlala i-Snow White esithombeni.
Kumele uqaphele ukuthi umdlalo uqala, kodwa ngokungangabazeki umdlali wezakhono, udunyiswe abagxeki - le ntombazane yayinethuba lokuqhubeka likhula kule ndlela, ngoba emva kokuqotshwa kokuqala, wayengasacabangi impilo yakhe ngaphandle kwe-movie.
Indima ye-superhero ethandekayo nokuqashelwa kwezwe
Ngo-2001, uKristin Kreuk waqhubeka ekhipha uchungechunge oluthi "Izimfihlo Zase-Smallville", ezadutshulwa ngumzila waseMelika eVancouver. Futhi, eqinisweni, uthole ingxenye yentombazane enhle, enhle nenomusa, okuyi-Clark oyinhloko yomlingiswa othanda ngayo.
Ngokwemvelo, ngonyaka ka-2001, kwakungekho muntu owayelindele ukuthi lolu chungechunge luzovame kakhulu. Kodwa-ke, indaba yabantwana be-Superman ebuntwaneni abanomdla kuzo zonke izingxenye zomhlaba. Le phrojekthi yahlala iminyaka eyishumi. U-Kristen Kreuk wadutshulwa kuwo iminyaka eyisikhombisa. Ngisho nangemva kokushiya uchungechunge, ubuyele ngezikhathi ezithile, ukuze agcwalise udaba lomlingisi wakhe. Indima ye-superhero ethandekayo yenza umdlali wezingane waseCanada abe udumo oludumile emhlabeni wonke.
Christine Kreuk: ifilimu
Ngokwemvelo, ngemuva kokuphumelela kulolu chungechunge, umlingisi omncane waqala ukuthola ezinye iziphakamiso. Futhi ekuqaleni kwakhe esikrinini esikhulu kwakuyi-comedy yentsha "i-Eurotour", ekhishwe ngo-2004. Lapha wenza njengo Fiona. Futhi ngo-2006 wadlala indodakazi yenkosi kuleli filimu emfushane "Dream Princess".
Ngo-2007 umkhankaso we-melodrama wenziwa, lapho indima enkulu eyadlala khona nguKristin Kreuk. I-filmography yomdlali we-actress yagcwaliswa ngendima kaNasim - owesifazane ongumSulumane, owazithola esesimweni esiyingozi ngemuva kokumemezela kokuzimela kwe-India. Ngonyaka ka-2009, wadlala u-Chun-Li, intombazane eyazi kahle i-karate, ezama ukuphindisela ukufa kukayise. Ngo-2011, uKristen wagxila kwifilimu eyimfihlakalo ethi "The Vampire", edlala indima kaMary Lucas.
Ngo-2011, umdlali wezithombe wayevele phambi kwezilaleli ngesithombe sikaHeather - umthandi womuntu ocebile, umlutha wezidakamizwa, emdlalweni we-Ecstasy. Futhi ngo-2012, uKristen wabhala ngefilimu ejabulisayo ethi "Space cocktail", lapho athola khona uHeather.
Ngisho ngenkathi kusebenza "umlingisi we-Smallville Secrets" wasebenza kwezinye izinhlelo. Isibonelo, ngo-2004 wadlala umlingo onamandla kulolu chungechunge lwe-mini ethi "The Wizard of Earthsea". Futhi ngo-2010 kwavela ezikrinini ze-TV ngomfanekiso kaTirza kwenye inhlelo - "uBen Hur". Ngonyaka ofanayo, wadlala uHana, ebonakala ngeziqephu ezine ze-series "Chuck".
Ngonyaka ka-2012, wathola enye indima enkulu - manje kulolu chungechunge elithi "Ubuhle Nezilwane". Ngokushesha iphrojekthi yaba yithandwa kakhulu. Lapha wabonakala phambi kwezilaleli ngesithombe sikaKatherine - umphenyi wamaphoyisa. Ngaphezu kokudalula omunye ubugebengu, intombazane izama ukuvula imfihlakalo eyinhloko empilweni yakhe - ngubani owabulala unina? Futhi efuna ukuthola ulwazi, uthola uVincent Keller - isosha kuphela okwazi ukubhekana nokuhlolwa kwesayensi okwehlulekile. Ngendlela, umlingani we-actress kulolu chungechunge nguJay Ryan. Ukudubula kuqhubeka futhi kuze kube namuhla.
UKristin Kreuk: impilo yomuntu siqu
Ngokwemvelo, impilo yomuntu womdlali wezemidlalo, imikhuba yakhe nokuzilibazisa - into yokuqala ethanda abalandeli. Kuyadingeka ukuthi uChristine Kreuk uvame ukuchaza ukuthi uyintombazane enokuthula, yebo, ngoba engabonakali kuma-nightclub futhi igama lakhe alihlotshaniswa nanoma yikuphi ukuhlambalaza. Ngakolunye uhlangothi, umlingisi uyilungu lenhlangano ekhuthaza ukusetshenziselwa kwemithombo yamandla emhlabeni. UChristine uyisisebenzi sokuzithandela e-American Red Cross. Futhi kungekudala kakhulu wasungula inhlangano ebizwa ngokuthi Girl Girl by Design, inhloso eyinhloko ukusiza amantombazane asencane ekukhetheni umsebenzi nokuthola imfundo.
Yiqiniso, abalandeli abaningi, nezihlobo zephupho elidumile lokubona uKristin Kreuk nomyeni wakhe. Kodwa umdlali we-actress akasakashadi. Noma kunjalo, kungekudala kakhulu emaphephandabeni kwakukhona ulwazi ukuthi uJay Ryan noKristin Kroyk babedlala uthando hhayi kuphela esikrinini - abantu abasha nabo bahlangana empilweni yangempela.